Turkiga oo soo iibsaday Ganataalo Casri ah iyo Mareykanka oo u hanjabay – Radio Daljir
Luulyo 13, 2019 7:00 b 0
Wasaaradda Gaashaandhigga ee Turkiga ayaa sheegtay inay soo gaareen gantaalada S-400 oo ay kasoo iibsatay wadanka Ruushka, taasi oo Mareykanka uu horay ugu hanjabay inuu cunoqabatayn kusoo rogayo Ankara haddii ay soo iibsato.
Shinaxnaddii ugu horaysay ee gantaalahan ayaa gaaray Turkiga, waxaana qoraal Jimcihii kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga ay ku sheegtay inay tahay qalabayntii ugu horaysay ee nooceeda uu hormarsanyahay oo la dhigo saldhigga ciidmaada cirka Ankara ee Murted.
“Keenidda qaybaha cusub ee gantaalahan waa ay sii socon doontaa maalmaha soo socda” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay dowladda Turkiga.
Dhanka kalle dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday Turkiga inay ka laabato heshiiska ay gashay oo ah kii ugu horeeyey nuuciisa oo uu galo dal katirsan isbahaysiga NATO oo uu la galo wadanka Ruushka, waxaana Mareykanka uu ku hanjabay in xukuumadda Ankara ay wajahayso cunoqabatayn dhaqaalle oo uu saarayo Mareykanka, waxaana Washington ay sidoo kalle sheegtay Turkiga inaan loo ogolaan doonin inuu ka qaybgalo barnaamijka lagu horumarinayo tiknoolojiyadda sare ee diyaaradaha dagaalka ee F-35.
Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland oo xalay La Kulmay Bulshada Magaalada Boosaaso (Daawo)